BADEFASS | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden ..
အာရဇ်ပင်ပူပြင်း tubs အနောက်တိုင်းနီအာရဇ်သစ်သားကိုရှင်းလင်းရာမှလုပ်နေကြသည်. သစ်သားဒီအမျိုးအစားဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုပ်မှ၎င်း၏ခုခံ၏ထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်. အတော်လေးသာယာသောနှင့်အဟာရကိုသင့်ကိုသဘာဝရနံ့. အဆိုပါမျှင်များကို structure ကိုဆုံးရေတင်းကျပ်စွာသေချာနှင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကိုယျတိုငျကာကှယျသစ်သားမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hot Tubs ထံမှအမျိုးမျိုးသောအချင်းရရှိနိုင်ပါတယ်4ရန် 8 ထိုအတွက်လူဦး ရိုးရှင်းသောပူရေချိုးစည်သို့မဟုတ်ရေချိုးကန် high-performance ကိုထင်းမီးဖိုနှင့်၎င်း, တစ်ဦး '' သစ်သား Whirlpool အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ’ လျှပ်စစ်အပူပေးနှင့်အတူ, နှိပ်နယ်-လေယာဉ်, filter စနစ်နှင့်အလင်းအနားယူပါ.
သစ်သားရေပူကန် – Clear ကိုအနောက်တိုင်းနီအာရဇ်
ရေချိုးကန်, Sauna plunge ရေကူးကန်သို့မဟုတ် ofuro
(11,637 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
Suter Bea လို့ပြောတယ်:
10. October 2017 မှာ 18:13
11. October 2017 မှာ 3:28
သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. Unser kleinstes Badefass hat einen Durchmesser von 150cm und eignet sich mit einem Aussenofen hervorragend für 2-4 လူထု. Die Unterlagen und Preisliste haben wir Ihnen per e-Mail zugestellt.
Bitte rufen Sie uns an, တယ်လီ. 052 347 37 27. ကျွန်ုပ်တို့ကူညီမှပျော်.
14. August 2014 မှာ 23:45
15. August 2014 မှာ 17:27
Danke für Ihre Anfrage. Das Badefass mit der Whirlpool-Ausführung hat sehr viele Optionen wie Steuerung, လျှပ်စစ်အပူပေး, နှိပ်နယ်-ဂျက် pump, အိုဇုန်းနှင့် filtration system ကို. Sie können sich somit Ihr Wunschbadefass selber zusammen stellen.
Die Unterlagen als Vorabinfo haben wir Ihnen per E-Mail zugestellt. Am besten rufen Sie uns an, တယ်လီ 052 347 3727 oder geben uns Ihre Telefonnummer für einen Rückruf bekannt.
BADEFASS ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden .. အာရဇ်ပင်ပူ tubs Clear ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်… (11,618)
ဥယျာဉ်ကိုပြုစု SAUNA သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌အဖြေသေးငယ်ကျန်းမာအိုအေစစ် .. စည်ပိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခွင့်ပြု… (6,198)
သစ်သားရေပူကန် မြောက်ပိုင်းကနေဒါ NATURA ကနေသစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူဂန္ပူ tubs အဆိုပါဖြစ်ပါသည်… (5,802)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ tubs အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကမ်းလှမ်းမှုသည်။… (5,665)
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးဧည့်သည်များတောင်းဆိုမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါပြီ. သင်ရှိသည်… (4,646)
စျေးနှုန်းစာရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစျေးနှုန်းစာရင်းပါဝင်သည်: hot tubs Pod ချွေးပေါင်းအိမ်တပ် ချ. ဥယျာဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် Huttengrill အိမ်သူအိမ်သားကင်တဲမီးဖို… (4,372)
သစ်သား WHIRLPOOL Classic နှင့်အချစ် - နည်းပညာနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း၏ရေချိုးအပျော်အပါးနှင့်ငြိမ်ဝပ်တွဲကိုစလှေတျ… (4,343)
Europa-line မဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးပြည့် .. ငါတို့၏ဥရောပလိုင်းအလိုလိုမြင်သည်အရာ. အရည်အသွေးမြင့်… (4,289)
အောက် weatherproof partner Holzpflege Doghouse ဝက်သစ်ကျပင် ချမ်းသာရေးသင်တန်း Barrel ကိုးကား ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ Grillhaus စျေးနှုန်းစာရင်း ဧဒုံ Ceadr WellnessBARREL USA သို့ Badezuber GartenSauna Primo ကင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အစဉ်အလာ siberian larch Grillkabine Sauna မော်ဒယ်များ မှတ်တမ်း စျေးနှုန်း သစ်သားရေပူကန် အခွင့်အာဏာ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေး နွေရာသီအိမ်တော်သို့ Saunahütte သြစတြီးယား ဒေါင်းလုပ် နမူနာပုံများ ဖင်လန် Sauna DIY များ စျေးနှုန်းတွေ Dampfkabine အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ မေးခြင်း WellnessFASS ဥရောပ GAZEBO Katalog ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံများ Gazebo ဥရောပ တင်ဆောင် Dampfsauna အနောက်တိုင်းနီအာရဇ် Kiefer ရုပ်ပုံများ